Mukadzi netsaona anoshandisa vamwene vake vekare "tauro" yekuoma maoko ake - SANTE PLUS MAG - Tamban RELAY
Mukadzi netsaona anoshandisa vamwene vake vekare "tauro" yekuoma maoko ake - SANTE PLUS MAG
Kusangana nevabereki vako vemunguva yako kwekutanga kwenguva kunogona kuunza kushushikana kukuru. Chero ani anoda kuti hukama hwavo hugare achaita zvese kuti ape yakanaka yekutanga kufungidzira kune yavo yeramangwana rakanaka mhuri uye hapana achasiya chero mukana. Nekudaro, dzimwe nguva zvinoitika kuti takatarisana nezvimwe zviitiko zvisingafano tarisa izvo zvinogona kutiisa mumamiriro ezvinhu anonyadzisa. Iyi ndiyo yaive nyaya yemukadzi aive akokwa kuzogara mazuva mashoma nevabereki vake vemunguva uye avo vakaita netsaona tezvara vake vepedyo kuti apukuse maoko. Iyi nyaya inotumirwa kwatiri nevatinoshanda navo kubva Zuva.
Griveaux, Chabane, Pierre Ménès vanopopota vachipopota! - FOOTBALL 01
Zviratidzo zveGreen zvehupfumi hweTogolese - Jeune Afrique